जागिरसंगै अतिरिक्त पैसा कमाउने हो ? यस्ता छन आइडिया « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
२९ बैशाख २०७९, बिहीबार १२:३४
घर भाडा र आफुलाई आवश्यक पर्ने खर्चका बिलहरू भुक्तानी गर्न मद्दत गर्ने पूर्ण-समय जागिरको साथ केही अतिरिक्त पैसा कमाउन कसलाई मन पर्दैन? एक साइड व्यवसाय केहि अतिरिक्त पैसा कमाउन को लागी एक राम्रो तरिका मात्र होइन, तर यसले तपाइँको भविष्य सिर्जना गर्न सक्छ र तपाइँको आम्दानी को प्राथमिक स्रोत हुन सक्छ।
शिक्षामा रुचि राख्नेहरूको लागि आयको धेरै राम्रो र सजिलो स्रोत बन्न सक्छ। यो काम सजिलो छ। कुनै लागत छैन। समय मात्र दिनु पर्छ र त्यो पनि आफ्नो इच्छा र सुविधा अनुसार। आजको समयमा अनलाइन कक्षाहरु धमाधम भइरहेका छन् । तपाईं YouTube जस्तै कुनै पनि प्लेटफर्मको साथ यसको सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरुमा कमाइ कम हुन सक्छ। तर निरन्तर कक्षा दिनुहोस्। साथै, तपाईंको आम्दानी बढ्दै जाँदा, यी कक्षाहरूलाई थप समय दिनुहोस्। धेरै अनलाइन प्लेटफर्महरू तपाईंको लागि उपयोगी हुन सक्छ। यी प्लेटफर्महरूले मानिसहरूलाई फ्रीलान्सरहरूको रूपमा काम गर्छन्। साथै, तपाईं बच्चाहरूलाई पढाउनको लागि घण्टा अनुसार तिर्न सक्नुहुन्छ।
YouTube पनि आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । राम्रो युट्युब भिडियोहरूले पैसा कमाउन सक्छ। कामको क्रममा ब्रेक लिँदा मानिसहरू YouTube मा समय बिताउँछन्। राति युट्युबमा धेरै ट्राफिक हुन्छ। मानिसहरू केही राम्रो कमेडी वा जानकारीमूलक भिडियोहरू खोज्छन्। यसरी तपाईको युट्युब च्यानलले सजिलै कमाउन सक्छ। तपाईंले YouTube मा मानिसहरूलाई गाइडहरू देखि खाना पकाउने सुझावहरू सम्म कुनै पनि कुरा साझा गर्न सक्नुहुन्छ।
युट्युबमा भ्युज र सब्सक्राइबर बढ्दै जाँदा आम्दानी पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैले लगातार भिडियोहरू राख्नुहोस् र सदस्यता बढाउन प्रयास गर्नुहोस्। लकडाउनको समयमा धेरै YouTubers अगाडि बढेका छन्। तपाईं पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रकाशित : २९ बैशाख २०७९, बिहीबार १२:३४